‘अब फिल्ममा आउँछु’ – प्रकाश सपुत - संवाद - नेपाल
युट्युबमा तहल्का मच्चाइरहेका छन्, प्रकाश सपुतले । दुई सातामै उनको लोकदोहोरी गीत ‘गलबन्दी’ ले ८० लाखभन्दा बढी दर्शक कमायो । वर्ष दिनअघि उनको ‘बोल माया’ गीत पनि यस्तै हिट बनेको थियो । सपुतसँग कुराकानी :
निश्चित थिममा लोकगीत गाउनुको कारण ?
मेरो रुचि ‘स्टोरी टेलिङ’ भएर होला । खासमा म गीतसंगीतको इमानदार सर्जक होइन । गीत/संगीतलाई भन्दा कथालाई जोड दिन्छु । कथा भन्ने माध्यम मात्र हो, गीतसंगीत । त्यसैले म गीत थिममा गाउन रुचाउँछु । गीतमा कथाको प्रभाव बढी देखिन्छ ।
‘गलबन्दी’ ले चाहिँ कस्तो कथा भन्छ ?
पहिले–पहिले गाउँघरतिर दिनभर काम गर्ने र साँझमा रोधी बस्ने गरिन्थ्यो । तीन–चार दिनसम्म रोधी चल्थ्यो । संगीत हाम्रो संस्कार, चलन मात्र थिएन, भावनात्मक सम्बन्ध थियो । एउटा कालखण्डको त्यो कथा यसमा झल्काउन खोजेको छु ।
भनेपछि यो ऐतिहासिक गीत हो ?
संस्कृतिका हिसाबले ऐतिहासिक हो । रोधी बस्ने र दोहोरी खेल्ने संसारमै नभएको चलन हाम्रोमा थियो ।
रोधी त अहिले पनि गाइन्छ नि ?
रोधी त दौरासुरुवालजस्तो भइसक्यो । दौरासुरुवाल पहिले सधैँ लगाइन्थ्यो । अहिले कहिलेकाहीँ लगाइन्छ । रोधी पनि पहिले सधैँ गाइन्थ्यो । अहिले कहिलेकाहीँ मात्र ।
यो थिममा गीत बनाउने सोच कसरी आयो ?
आँगनमा बसेर रोधी गाएको सानै छँदा देखेको हुँ । केटाले गाउने तर केटी लजाउने । केटी गाउन छाडेर अचार लिएर आउने । यस्ता कथा सुनेको थिएँ । त्यसमा मैले शृंगार र कला थपेर गाएँ ।
‘बोल माया’ को भिडियो शक्तिशाली थियो । त्यसको तुलनामा गलबन्दी कमजोर लाग्दैन आफैँलाई ?
सर्जकका रुपमा म दुवैलाई समान मान्छु । अघिल्लो कथा बलियो थियो । वैदेशिक रोजगारीको पीडाको विषयवस्तुले छोएको थियो । पछिल्लोको विषयवस्तु रमाइलो पाराको छ । विषयवस्तुले फरक पारेको हुन सक्छ । ‘बोल माया’ मा मेरो भाव पोखिएको छ । त्यसको भिडियोमा मिहिनेत बढी पर्‍यो ।
लगातार गीत हिट हुनुको राज के हो ?
मानिसलाई यथार्थपरक विषय मन पर्दो रहेछ । संसारभर यथार्थपरक चलचित्र, पुस्तक नै मन पराइन्छ । मेरा गीतमा पनि प्राकृतिक र मौलिक विषय भएकाले मन पराइएको हुनुपर्छ ।
लोकगीतले यति चर्चित बनाइदिन्छ भन्ने सोच्नुभएको थियो ?
थिएन । बीचमा दोहोरी ब्याटल गाएँ । एउटै क्षेत्रमा सीमित भएर मात्रै पुग्दैन भन्ने लागेको थियो । लोकगीत मेरो एकोहोरो सपना थिएन । फिल्म खेल्ने इच्छा थियो । कथामा रुचि राख्थेँ ।
लोकगीतले सेलिब्रिटी बनाइदियो । अब फिल्मतिर जाने होला नि ?
केही राम्रा प्रोडक्सन हाउसबाट कुरा आइरहे पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । संगीतले मलाई धेरै कुरा दियो । संसार घुमायो । संगीतमै दुई–तीन वर्ष बिताएपछि फिल्मतिर लाग्छु होला । संगीत, दृश्य, गीतमार्फत जसरी दर्शक–श्रोतालाई बाँध्न सकेको थिएँ, त्यसरी फिल्ममा बाँध्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पनि जुटिसकेको छैन । केही विषयवस्तु फिल्मका लागि साँचेर भने राखेको छु ।
फिल्म निर्देशनमा जाने हो ?
सामाजिक विषयवस्तु संकलन गरेर राखेको छु । लोकगीतमा जस्तै फिल्ममा ती विषयवस्तु उठान गर्ने रहर छ । म आफ्नै केही कथा लिएर फिल्ममा जान्छु ।
ट्याग: १० प्रश्नमनोरञ्जन